Agromart | Agricultural Marketplace Nepal आफ्नै बारीमा लगाउन सकिन्छ स्ट्रबेरी – Agromart
आफ्नै बारीमा लगाउन सकिन्छ स्ट्रबेरी
हिमाली तथा केही पहाडी जिल्लामा स्ट्रबेरी खेती हुदैँ आएको छ। धेरै जसोले यसलाई ब्यावसायिक खेतीमा रुपमा अंगाल्न सकेका छैनन् । तर, पछिल्लो समय जाडो याममा फल दिने स्ट्रबेरी खेती तर्फ नेपाली कृषकहरु व्यावसायीक रुपमा लागेका छन् । स्ट्रबेरी र भूईंकाफल ( Strawberry) फ्रागार्या प्रजातिको विरूवा हो । यो फल विश्वव्याी खेती गर्ने गरिन्छ भने यस फलको विशेष गन्ध यसको पहिचान बनेको छ । यो फल रातो रङ्गको हुने गर्दछ । यस फललाई ताजा फलको रूपमा साथै प्रशोधन गरि जाम, रस, आइसक्रिम, मिल्क शेकको रूपमा समेत खाने गरिन्छ ।
हावापानीको दृष्टिकोणले यो बाली शीतोष्ण प्रदेशीय हो। यसका विभिन्न जातहरु विभिन्न हावापानीमा अनुकूलित हुने किसिमले विकसित भएकोले यसको खेती समशीतोष्ण प्रदेशसम्म भैरहेको छ। यसको खेती संसारका धेरै देशहरुमा भैरहेको पाईन्छ र पौष्टिकताको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसको खेती समुद्र सतहबाट १००० देखि २००० मिटरसम्म सफलताका साथ भैरहेको छ। प्रशस्त घामको प्रकाश पुग्ने र सिंचाईको सुविधा पुर्‍याउन सकिने ठाउँमा यसको खेती राम्रो हुन्छ।
यसको गुणस्तरीय फल उत्पादन गर्न तापक्रमको कस्तो अवस्था रहनु पर्दछ :
यसको लागि माटो निकै मलिलो चाहिने हुँदा प्रति रोपनी २.५ मे.टन गोबर वा कम्पोष्ट मल, ६-८ के.जी. यूरिया, ५.६ के.जी. डि.ए.पि. र ५-७ के.जी.म्यूरेट अफ पोटास आवश्यक पर्दछ। यसको अलावा जिंक सल्फेट ०.५५, क्याल्सियम सल्फेट ०.५५, र बोरिक एसिड ०.२५ फोलिएर स्प्रे गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ।
यसको फल तयार हुन कति अवधि लाग्दछ?
यसबालीलाई कीराहरुले कतिको सताउँदछ :
तापक्रममा आएको एक्कासीको परिवर्तनले गर्दा फलको टुप्पो फुट्ने साथै फल खोक्रो हुने गर्दछ जसलाई भ्यागुते मुख पनि भनिन्छ। यस्तो अवस्थालाई सहन गर्ने खालका जात पनि विकास भएका छन्। वास्तवमा यस्ता समस्याहरु यदाकदा देखिन्छन्। यसका धेरै कारणहरु मध्ये मौरीको क्रियाकलापमा कमी आई राम्ररी परागसेचन नहुनु, माटोमा नाईट्रोजनको मात्रा बढी हुनु आवश्यकता भन्दा बढी चिसो र तुषारो मुख्य मानिन्छ।